विचार – Jagaran
राउटे को हो ?, के हो राउटे ? राउटे नेपालको धेरै विविधताभित्रको एउटा आफ्नै मौलिक विविधतायुक्त समुदाय हो । धेरै अचम्म नमानौँ वा अचम्म मानेजस्तो पनि नगरौँ । यो समुदायमा पनि मान्छे नै बस्छन् । जहाँ शाही ठकुरी जातका नागरिक छन् । शाही ठकुरीभित्र पनि कलेल, राष्कोटी र स्ववंशी । राउटेको आफ्नै किसिमको जीवनशैली छ […]
रोल्पा जिल्लाको सुनछहरी गाउँपालिका माबाङमा अवस्थित नव चेतना विद्यालय जनयुद्धको समयमा जनवादी शिक्षाद्धारा अध्यापन गराइनथ्यो । तत्कालिन नेकपा माओवादीद्धारा संचालन गरिएको थियो, जनयुद्धको समयमा नेपालका विभिन्न ठाउँका शिक्षकहरु लाई गलत व्यवहार गरेवापत ती शिक्षकहरु लाई कारवाही गरिन्थ्यो, तिनीहरुले नव चेतनामा अध्यापन गराउथे र उनीहरुले विद्यार्थी लाई “क” बाट कलम पढाउनुको सट्टा “क” बाट कम्युनिष्ट पढाउने […]
विद्यालय के हो ? उत्तर भिन्न भिन्न आउलान् । अभिभावकका लागि विद्यालय सन्तान ज्ञान, अशल, सफल, व्यवहारिक र सभ्य बनाउने थलो होला । शिक्षकका लागि विद्यालय ज्ञान, सीप, व्यवहार, नैनतकता, आदि सिकाउने थलो होला । विद्यार्थीको लागि विद्यालय एउटा यस्तो थलो होला जहाँ आफुले आफुलाइ चिन्न सहयोग गरिरहन्छ । विद्यालय समाजको लागि संस्कार को निरन्तरता […]
शिवराम पौडेल । गृहकार्य आखिर के हो जसको कारणले बिध्यार्थीले अनेकन शारीरिक-मानसिक हैरानिहरु को सामना प्राय गर्नु परेको हुन्छ । गृहकार्य नगर्दा के हुन्छ ? अझै भन्दा गृहकार्य नदिदा चाहिँ के हुन्छ ? यसमा अभिभाबक र शिक्षकको कस्तो भुमिका हुन सक्छ? जस्ता मुद्दाहरूलाई अनुभवका आधारमा यो लेखमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । गृहकार्य बिश्वब्यापी रुपमानै […]
आदर्श विक्रम सिहँ । समयको परिभाषा व्यक्ति अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ । एक बच्चाले खेलिरहेको समय, एक युवाले मोजमस्तीमा गुमाइरहेको समय, एक प्रेमिल जोडी डेटिङ पार्कमा बसिरहेको समय, एक बूढो व्यक्तिले जीवनको अन्त्यमा पश्चाताप गरेर सम्झिरहेको समय । सबैको साझा निष्कर्ष । समय अमुल्य चिज हो । यसलाई किन्न सकिदैन, धम्की दिन सकिदैन, ढिलो चाडो […]
पृष्ठभूमीः ‘सिम्ता’ क्षेत्र सुन्दरताले भरिपूर्ण क्षेत्र हो । सिम्ता गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको पुर्वमा अवस्थित छ । समुन्द्री सतहदेखि यसको उचाई ५०० देखि २३०० सम्म रहेको यो क्षेत्र महाभारत पर्वतमालामा अवस्थित छ । यो परापुर्वकालमा ७०० सिम्ताको रुपमा परिचित थियो । विस्तारै यसलाई परिमार्जित गरेर सिम्ता भनेर नामाकरण गरियो । सिम्ताका बारेमा विभिन्न प्रकारका […]
पृष्ठभूमि: नेपाली जनताले विभिन्न शासन व्यवस्थाको धेरै दु:खद्, केहि आशावादी र थोरैमात्र सुखद् अनुभुती गर्नुपर्यो । फेरिँदा राजनितिक कालखण्डमा सञ्चार माध्यममा प्रत्येक्ष रुपमा असर परेको जगजाहेर छ । राणाशासन कालमा वैदेशिक विश्वास जित्नकै लागि मात्रै भए पनि एउटा ‘सनद्’ को भरमा वि. सं. १९५८ मा शुरु भएको ‘गोरखापत्र’ लाई साप्ताहिक, हप्तामा दुई पटक हुँदै दैनिक […]
वि.सं. २०५२ को हिउँदताका चितवनमा बाल श्रमिकको अवस्थाबारे अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बेला भरतपुरस्थित ‘समीम बडी बिल्डर्स’ का मालिक नसीम अहमदसँग भेट भयो। वीरगन्जमा नाम कमाएका पेन्टर समीमका भाई नसीम अहमद नेपालका वंशज नागरिक थिए। यिनका पिता–पुर्खा सयौं वर्षदेखि नेपालमा बसोवास गरेको जानकारी पाएँ। राष्ट्रिय अखण्डता एवं समृद्धिका लागि नेतृत्ववर्ग इमान्दार हुनुपर्ने र तत्कालै गर्नुपर्ने काममा […]
खै ! कसरी सम्वाेधन गरूँ तिमीलाई निर्दाेष निष्कपट या याे आधुनिक संसारमा साक्षातकार नभएकाे । कसरी दिउँ तिम्राे परिचय मानव जातिकै एक लाेपाेन्मुख जाति भनेर १० वटा लाेपाेन्मुख समुदायमध्ये तिम्राे जस्ताे अवस्था, परिवेश तथा दैनिक व्यवहार अन्य जातिहरूले भाेग्नु परेकाे छैन । जव तिम्राे मयल परेकाे हिस्सी अनुहार, कहिले नकाेरिएकाे जगल्टीएकाे कपाल, च्यातिएर दाग लागेका […]
दिपक जैसी । वास्तवमा पर्यटन नै नेपालको आर्थिक उन्नतिको मेरुडण्डको मुख्या आधार हो भन्ने कुरा अहिले नेपाल सरकारले गरेको पर्यटन सम्वन्धि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू सार्वजनिक हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घोषित कार्यक्रम मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान तथा विकास गर्न एक सय नयाँ गन्तव्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले […]